७ वटा प्रदेशमा कुन कार्यालय कहाँ ? थाहा पाउनुहोस् – Peacepokhara.com
७ वटा प्रदेशमा कुन कार्यालय कहाँ ? थाहा पाउनुहोस्
काठमाडौं ५ माघ । सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख सहित प्रदेश कार्यालय रहने स्थान निश्चित गरेको छ । बुधवार मात्रै प्रदेश प्रमुख सहित अस्थायी मुकाम तय गरेको सरकारले अब प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय निवास एबं प्रदेश सांसद, सभामुख , उपसभामुखको कार्याकक्ष तत्कालको लागि रहने स्थान समेत निश्चित गरेको हो । जस अनुसार सात वटै प्रदेशमा निम्नानुसार ब्यवस्था गरिएको नयाँपत्रिकाले छापेको छ ।
१ नं प्रदेशमा सरकारले क्षेत्रीय पशुसेवा निर्देशनालय भवनलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तोक्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको आवास भने तत्कालका लागि राष्ट्रबैंकको गेष्ट हाउस प्रयोग हुनेछ ।
यस्तै संसदभवनको रुपमा विरेन्द्रसभागृहलाई प्रयोग गर्ने तयारी गरेको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।
यस्तै जिल्ला समन्वय समितिको भवनलाई संसद सचिवालय र सभामुख/ उपसभामुखको कार्यकक्ष बनाउने तयारी छ । मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका रुपमा क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयलाई प्रयोग गर्ने तयारी सरकारको छ ।
२ नं प्रदेश
२ नं प्रदेशमा सरकारले जनकपुरस्थित सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बनाउने भएको छ । यस्तै, प्रदेश प्रमुखको आवासको रुपमा तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकको गेष्ट हाउस प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेशसभाको सभाहल, संसद सचिवालय, सभामुखरउपसभामुखको कार्यकक्ष शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा हुनेछ । शैक्षिक तालिम केन्द्रभित्र रहेको छात्रावासलाई सभामुख/उपसभामुखको आवास बनाइनेछ ।
यस्तै मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको रुपमा पनि शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवननै प्रयोग गर्ने तयारी भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिपकुमार चापागाइले जानकारी दिए ।
शैक्षिक तालिम केन्द्रमा ६ वटा ठूला भवन रहेकाले धेरै कार्यालय त्यही राख्न लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाइले बताए ।
३ नं प्रदेश
३ नं प्रदेशका लागि पनि आवश्यक पर्ने भवनहरुको व्यवस्था भएको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवासका लागि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवन प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै अहिले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रहेको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राख्ने तयारी गरेको छ ।
यस्तै साविकको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा प्रदेशसभाको सभाहल र प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय संचालन गर्ने तयारी गरेको छ । सभामुख र उपसभामुखको कार्यालय पनि त्यही भवनमा अटाउने तयारी छ ।
यसैगरी, सरकारले प्रदेश मन्त्रालय र विशिष्ट पदाधिकारीको आवासका लागि साविकका विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले ४ नं प्रदेश अन्तरगत अध्यागमन कार्यालय पोखरा र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास बनाउने तयारी गरेको छ ।
दुवै भवन एकै ठाउँमा रहेकाले प्रदेश प्रमुखका लागि आवास र कार्यालयसँगै व्यवस्थापन गर्न लागिएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए । यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका लागि सीप विकास कार्यालय पोखराको भवन प्रयोग गर्ने तयारी छ ।
सीप विकास कार्यालयको निर्माणाधिन उक्त भवन १५ देखि२० दिनसम्म निर्माण सम्पन्न भइसक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको अनुमान छ ।
यस्तै, नगरविकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवनलाई प्रदेश सभाहल बनाउने तयारी भएको छ । उक्त भवनमा संसद भवनसँगै प्रदेशसभाका सचिवालय र सभामुख/उपसभामुखको कार्यकक्ष रहनेछ ।
मुख्य मन्त्री, मन्त्रीहरु, सभामुख र उपसभामुखको आवास व्यवस्थापनबारे पनि तयारी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले जनाए ।
प्रदेश नं ५ को अस्थायी राजधानी वुटवलमा प्रमुख कार्यालयका लागि अहिलेसम्म भवनको खोजी हुँदैछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीका अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास सिप विकास केन्द्र बुटवल, राजस्व अनुसन्धान केन्द्र बुटवल र उद्योग व्यापार संघ बुटवलको भवनमध्ये एक प्रयोग गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि श्रम कार्यालय, बुटवलको भवन प्रयोग गर्ने तयारी छ । ६ तले उक्त भवन १५ देखि २० दिनमा निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । उक्त भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य मन्त्रालयहरु समेत अटाउन सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मैनालीले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको आवासका लागि भने भाडाको घर प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, प्रदेश सभाहल र संसद सचिवालय उद्योग वाणिज्य संघको हलमा राख्ने तयारी छ । उक्त भवनमा संसद सचिवालय, सभामुख / उपसभामुखको कार्यालय र संसदहल एकै भवनमा हुनेछ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मैनालीले वुटवलमा सरकारी स्वामित्वको भवन प्रयाप्त नहुँदा कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए ।
६ नं प्रदेश
सरकारले प्रदेश नं ६ को प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवासका लागि क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तालिम केन्द्र भवनलाई प्रयोग गर्ने भएको छ ।
यस्तै, प्रदेश संसदको सभाहल, संसद सचिवालय र सभामुख/उपसभामुखको कार्यालय र आवास साविकको क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा राख्ने तयारी गरेको छ ।
यस्तै, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयको कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, अन्य क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा अन्य प्रादेशिक मन्त्रालय र कार्यालय रहनेछन् ।
७ नं प्रदेशमा भने सरकारले प्रदेश कार्यालय संचालनका लागि भवनको खोजी गरिरहेको छ । क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेलका अनुसार बिहीबार विभिन्न सरकारी भवनहरूको अध्ययन गरिएको छ ।
अब शुक्रबार अस्थायी कार्यसंचालनका लागि भवनको टुंगो लगाउने बताए । प्रदेशसभाका लागि भने जिल्ला समन्वय समितिको भवन प्रयोग गर्ने निश्चित भएको क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेलले बताए ।
सार्कका लागि ११ लाखको गमला
peacepokhara 16 Nov 2014
अत्याधिक गर्मीले कतारमा मध्याह्न काम गर्न रोक
peacepokhara 11 Jun 2015